ချောကလက်စားတာများသွားရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ? ? – Shwe Innlay
HomeHealthချောကလက်စားတာများသွားရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ? ?
ချောကလက်စားတာများသွားရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ? ?
အစားအစာတွေထဲ ချောကလက်က စွယ်စုံကောင်းတဲ့ အစားအစာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Dark Chocolate က antioxidants ပိုကြွယ်ဝပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းကျိုးပိုရှိပါတယ်။ ချောကလက်ကို ကျန်းမာရေးအရပင်ဖြစ်စေ စားပေးသင့်သော်လည်း စားသုံးမှုပမာဏ များသွားတဲ့အခါမှာတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ချောကလက်မှာ ကယ်လိုရီ မြင့်မားစွာပါဝင်ပြီး များများစားပါက ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာစေပါတယ်။ အဝလွန်တဲ့ အိုဗာဝိတ်ဖြစ်နေသူများကတော့ နှလုံး၊ဆီးချို နှင့် သွေးတိုးခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ သင်ဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းသူတစ်ယောက်ဆိုလျှင်တော့ လွန်စွာမစားမိဖို့ သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ချောကလက်မှာ သကြားပါဝင်မှုများပါတယ်။ သကြားနည်းတဲ့ ချောကလက်က ပိုပြီးခါးပါတယ်။ အချိုဓါတ်များတဲ့ ချောကလက်က ခံတွင်းပြဿနာများဖြစ်တဲ့ သွားနှင့်သွားဖုံးကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး ဆီးချိုလည်း တက်စေပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်မှာဆီးချိုရောဂါ ရှိတယ်ဆိုလျှင်တော့ ချောကလက်က သင့်ရဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ပိုပြီး မြင့်တက်စေနိုင်တာကြောင့် သတိပြုဆင်ခြင်ရမယ့် အရာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချောကလက်တွင် ကဖင်းဓါတ်ပါဝင်ပြီး အဲ့ဒိဓါတ်ဟာ အက်ဆစ်သဘာဝ အချဉ်ဖောက်စေပါတယ်။ ကဖင်းဟာ အူသိမ်အူမ အူလမ်းကြောင်းများကို အားကြွစေခြင်းကြောင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများ (သို့) ဝမ်းပျက်ခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ ချောကလက်ကို အလွန်အကျွံမစားသင့်တဲ့ အကြောင်းပြချက် နောက်ထပ်တစ်ခုပါပဲ။
ချောကလက်မှာ ပိုတက်စီယမ်ဓါတ်လည်း ပေါကြွယ်ဝပြီး ဒါဟာ လူအများစုအတွက်တော့ ပြဿနာတစ်ရပ် မဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော် ကျောက်ကပ်မကောင်းသူ၊ ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ရောဂါဝေဒနာရှိသူများအတွက်တော့ ဒီလို ပိုတက်ဆီယမ်မြင့်မားတဲ့ အစားအစာ စားသုံးခြင်းကို သတိထားစောင့်ကြည့်ရမယ့် အနေအထားတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်ကပ်မကောင်းတဲ့သူအတွက် ချောကလက်က စားသင့်တဲ့အစားအစာတစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။
ဘီယာသောက်ခြင်းက ရောဂါတော်တော်များများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်
Beer သောက်တဲ့သူတွေသာ ရနိုင်တဲ့ ကောင်းကျိုး ၁၂ ခု
ဘီယာပုံမှန်သောက်သောအမျိုးသားများ အိပ်ရာထဲကကိစ္စတွင် သာမန်ထက် ပိုမိုစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း ပြောကြား
ဗိုက်ထဲအစာမရှိချိန်မှာ စားသုံးရန်သင့်တော်တဲ့ အစားအစာ ၆ မျိုး